श्रीमतीको लागि खाडीमा गए श्रीमती भने अरुको अं’गालोमा बेरिएको देखेपछि मेरो हो’स उड्यो ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)….. – SUDUR MEDIA
श्रीमतीको लागि खाडीमा गए श्रीमती भने अरुको अं’गालोमा बेरिएको देखेपछि मेरो हो’स उड्यो ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)…..
April 22, 2021 AdminLeaveaComment on श्रीमतीको लागि खाडीमा गए श्रीमती भने अरुको अं’गालोमा बेरिएको देखेपछि मेरो हो’स उड्यो ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)…..
वै’देशिक रो’ज’गारीमा रहेका धेरै युवाहरुको घर उ’जाडीएको उदा’हरण दे’खिएका छन् । यु’वकहरु खा’डी मुलु’कमा पसिना बगाएर काम गरिरहेका हुन्छन् । तर स’न्तान लिएर गाउँमै बसेका श्रीमती भने पा’रिवारिक दवाव, सामाजिक अप’हे’लनाका कारण गलत बाटो अ’पना’एका थु’प्रै उदाहरण छन् । कतिपय महिला आफ्नै स्वार्थले परिवार र श्रीमान छो’डेर छु’ट्टै बाटो लागेको पनि देखिएको छ ।
यहाँ प्रस्तुत गरिएको घ’ट’ना पनि त्यस्तै छ । सा’उदी’मा रहेका एक पुरुष, परिवार र श्रीमतीका लागि भन्दै प’सिना ब’गाइरहेका थिए । तर उहाँ विदेशमा रहेका श्रीमानले अ’चा’नक सा’माजिक स’ञ्जालमा आफ्नै श्रीमतीले घु’म्टो ओ’ढेर अर्कैको बे’हुली भएको देखे । त्यसपछि उनी अहिले नेपाल आएका छन् । श्रीमती अर्कै पु’रुष’संग वि’वाह गरेर काठमाडौमा बसेको थाहा पाएको बताए ।
झापा द/मकका यि पुरुषले काठमाडौमा खो’ज्न जाँदा पनि घरभेटी फे’ला पारे तर श्रीमतीलाई फे’ला पार्न सकेनन् । श्रीमतीले २८ लाख रुपैया हि’ना’मिना गरेर लगेको श्रीमानको आ रोप छ । झापा गौरादह नगरपालिका १ का उनीहरु दमकमा आएर बसेका थिए । त्यहाँ बस्दा उनको श्रीमतीको अर्का एक पुरुषसंग स’म्पर्क रहेको आफुले धेरै पछि थाहा पाएको बताए ।
आफ्नो मात्र क’माइले पुगेन भनेर कपडा सिलाउने काम गर्छु भनेपछि दमक गएर बस्न आफुले अ’नुम’ति दिएको उनको भनाई छ । वि’देशमै गा’डी चलाउने उनको गाडीले दु’र्घ’टना गराएपछि जे ल मा परेका थिए । जे’ ल वाट बाहिर नि’स्केपछि पनि राम्रोसंग कु’राकानी भएको थियो । तर पछि आफुले अर्कैसंग गएको भन्ने ख’बर पाएको बताए । भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोलाः
आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको बजारभाउ ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो…….
ढुङ्गावाली सुन्दरीको जादुमय स्वर, ढुङ्गा बेचेर छोरीको गायिका बन्ने सपना पूरा गर्न सकिएन भन्दै धु’रुधु’रु रो’ए बुबाआमा ! हे’र्नुहोस (भिडियो सहित)
सुजिताको र’हस्यमय मृ’त्यु बारे चितवनका एसपी यसो भन्छन् ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)